पत्रकारकै हुन् त निषेधाज्ञामा प्रेस लेखेर हुइँकिएका महंगा गाडी ? - Saptakoshionline
शुक्रबार, आश्विन ०९, २०७७
पत्रकारकै हुन् त निषेधाज्ञामा प्रेस लेखेर हुइँकिएका महंगा गाडी ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र १५, २०७७ समय: ६:२०:३१
नेपालका सबै सञ्चार माध्यमका अधिकांश गिनेचुनेका रिपोर्टर, डेस्कका हाकिमसाबदेखि प्रधान सम्पादकहरूलाई चिन्छु । नेपालस्थित विदेशी सञ्चार माध्यमका रिपोर्टरहरू पनि चिन्छु । तर यो निषेधाज्ञामा काठमाडौंका सडकमा महंगो गाडीमा प्रेस टाँसेर हुइँकिरहेका कोही पनि चिन्दिनँ । सोध्न मन लागेको छ, आखिर उहाँहरू को हुनुहुन्छ होला ?’
यो पत्रकार राजेश राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेको पोस्ट हो ।
पछिल्लो समयमा प्रेस लेखेर हिँड्ने महंगा गाडीको संख्या उपत्यकाको सडकमा बढेका छ । नेपालमा पत्रकारिता गरेर केही पत्रकारहरू गाडी नचढेका भने होइनन्, तर बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको समयमा सडकमा प्रेस लेखिएका निकै महंगा गाडी देखिएका छन् ।
विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) कारण सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय नाका सिलसहित देशमा ४ महिना लामो बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन लागू गर्‍यो ।
त्यसपछि साउन ७ गतेदेखि केही खुकुलो गर्‍यो तर कोभिड–१९ को संक्रमण भने झनै फैलियो । अझ उपत्यकामा पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि उपत्यकाका ३ वटा जिल्लाले निषेधाज्ञा नै लागू गरेको एक साता नाघिसक्यो ।
यसबीचमा धेरै पत्रकार बेरोजगार भए । महामारीको समयमा अर्थतन्त्र ओरालो लागेपछि अन्य निजी क्षेत्रमा काम गर्ने पनि बेरोजगार भएका छन् । तर पत्रकारहरू भने बेतलबी भन्दै बेरोजगार भएका छन् । काठमाडौंमा मात्रै २ हजार भन्दा बढी पत्रकार बेरोजगार बनेको बताइन्छ । ठूला भनिने मिडिया हाउसका पत्रकार सबैभन्दा पहिला बेरोजगार भए ।
पत्रकारहरू बेरोजगार भइरहेको यो अवस्थामा उपत्यकालगायत देशभर प्रेस लेखेर हिँड्ने चार पांग्रे सवारी साधनहरू भने वृद्धि भए ।
महामारीको समयमा रोजगारी गुमाएर पत्रकारहरू घरमा थन्किएका छन्, सडकमा भने प्रेस लेखेर सावरी साधनहरू हुइँकिरहेका छन् । भने बढेका छन् ।
सरकारले अत्यावश्यक सावरी साधनको रूपमा प्रेसका सवारी साधनलाई छूट दिएको छ र दिनु पनि पर्छ ।
मिडिया हाउसका कर्मचारी बोक्ने, रिपोर्टिङ गर्ने सवारी साधनहरू सामान्य समयमा हिँडिनै रहेका हुन्छन्, यस्तो बेलामा झन् धेरै हिँड्छन् ।
नेपालमा पत्रकारिता गरेर कार अथवा चारपांग्रे सवारी साधन चढ्ने पत्रकारहरू औंलामा गन्न सकिन्छ, महंगा गाडी चढ्ने त कमै छन् ।
नेपालमा खुलेका मिडिया हाउसका मालिकहरूका सवारी साधनहरू छन् । यसलाई पनि छाडौँ । तर पछिल्लो समयमा प्रेस लेखेर गैर पत्रकारहरूले सवारी साधनहरूको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
केही समयअगाडि गाडीमा प्रेस लेखेर एक भारतीय नागरिकलाई भैरहवा नाकासम्म पुर्‍याएपछि भाडामा कुरा नमिल्दा कुरा बाहिरिएको थियो ।
यस्तै सर्लाहीमा प्रेस लेखेर गाडीले हातहतियार समेत ओसारपसार गरेको समाचार बाहिरिएका थिए । उपत्यका छिर्ने दर्जनौं सवारी साधनहरू वास्तविक प्रेस नभएर फर्काइएका थिए ।
उपत्यकाका सडकहरूमा पनि महंगा कार जिपहरू प्रेस लेखेर हिँडिरहेका देखिन्छन् । प्रेस लेखेर हिँडेपछि प्रहरीले पनि निर्वाध रूपमा गाडीलाई जान दिन्छ । कतै पनि प्रेस लेखेको सवारी साधनलाई सोधपुछ गरिँदैन ।
सरकारले नै प्रेसलाई हिँड्न छुट दिएकाले प्रेस लेखेको सवारीलाई सोधपुछ नगर्ने प्रहरीहरू बताउँछन् ।
‘प्रेसलाई कसरी चेक गर्नु सर, माथिबाटै चेक नगर्नु भन्ने आदेश छ,’ गोंगबु नयाँ बसपार्कमा खटिएका एक ट्राफिक प्रहरीले भने ।
पत्रकार महासंघले प्रेसको दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेको बताएको छ ।
सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ : गोविन्द आचार्य पत्रकार महासंघ
नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस लेखेर हिँड्ने सबै गाडीहरू वास्तविक पत्रकारको हो या होइन ? भन्ने कुरा चेक गर्न अनुरोध प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ । प्रेसको दुरुपयोग हुन नदिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए ।
‘हामीले प्रेसको दुरुपयोग हुन नदिनका लागि प्रेस लेखेर हिँड्ने सवारी साधनहरू पनि चेकजाँच गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेका छौं,’ आचार्यले भने ।
कोरोनाभाइरसको महामारीको समयमा पत्रकारभन्दा अरूलाई हिँड्न नदिने भएकाले अन्य मानिसहरूले प्रेस लेखेर अवैध ओसारपसारमा लागेको थाहा पाए प्रहरीलाई खबर गर्न पनि महासंघले अपिल गरेको छ ।
सर्लाहीमा प्रेस लेखेर हतियारको ओसार पसार गरेको थाहा पाएपछि महासंघले प्रहरीलाई खबर गरेको र नागढुंगामा पनि उपत्यकामा अवैधरूपमा आउन खोज्नेलाई कारवाहीको दायरामा पुर्‍याएको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।
पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पनि प्रेस लेखेर हिँड्ने, युटुबरहरूले पनि प्रेस लेखेर हिँड्ने भएकाले यस्ता कुराको नियमन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ ।
पत्रकारका नाममा मिडियामा गलत पूँजीको आगमन भएको सत्तारुढ दल नेकपा निकट प्रेस संगठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल बताउँछन् ।
‘पछिल्लो समय अनलाइन मिडिया धेरै चलेका छन् । तिनीहरू कुन स्रोतबाट चलेका छन् ? कसरी चलेका छन् ? भन्ने विषय नै गम्भीर अनुसन्धानको विषय भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटको प्रेस संगठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल बताउँछन् ।
पत्रकारभन्दा मिडियामा लगानी गर्ने यस्तै व्यक्तिहरूले महंगा–महंगा गाडी लिएर हिँड्ने गरेको उनको उनको भनाइ छ।
‘प्रेसका नाममा दुरुपयोग हुने कुरा चाहिँ गलत हो तर त्यसका भित्रका अन्य कुरा पनि हेर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।
पछिल्लो समयमा कोरोनाभाइरसको महामारीका समयमा सबैभन्दा धेरै बेरोजगार श्रमजीवी पत्रकार भएकाले अबको बहस त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पत्रकारको तलबले गाडी चढ्न धेरै गाह्रो छ : अजयबाबु सिवाकोटी, प्रेस युनियन, महासचिव
पत्रकारले भन्दा पनि मालिकहरूले आफ्नो सवारी साधनमा प्रेस लेखेर हिँडेको नेपाली कांग्रेस निकट प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटी बताउँछन् । मिडियामा शुद्धीकरणको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
‘मिडियामा शुद्धीकरण ठूलो विषय बनेको छ,’ महासचिव सिवाकोटीले भने, पत्रकारको तलबले काठमाडौंमा बसेर गाडी चढ्ने कुरा धेरै गाह्रो विषय हो ।’
बाल संरक्षणका लागि एक्यवद्धता परियोजना बैठक सम्पन्न
धनकुटा । प्रदेश नंम्वर एकको १४ वटै जिल्लामा संचालित बाल संरक्षणका लागि एक्यवद्धता परियोजना अन्तर्गत जिल्ला समन्वय समिति ...
धनजन गुमाएका पिडित परिवारलाई कांग्रेसको आर्थिक सहयोग
धनकुटा । अविरल बर्षाका कारण भान्साघर भत्किएर धन जन गुमाएका धनकुटा जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ९ मूर्तीढुंगाका न...
इटहरी जेसिजको हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता, तरहरा प्रथम
इटहरी/ कोरोनाको महामारी बिच जनचेतनामुलक कार्यक्रम गदै इटहरीमा रहेका विभिन्न जेसिजहरुको जेसिज सप्ताहको सरुवात भएसंगै बिभि...
नेपालमा थप १७ जनाको मृत्यु, १४९७ कोरोना संक्रमित थपिए
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १४९७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप १...
इटहरी उपमहानगरले सुत्केरी गाईभैसीलाई २५ सय भत्ता दिने
इटहरी उपमहानगरले सुत्केरी गाईभैसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने गरेको छ । इटहरी उपमहानगर पशुपंक्षी शाखा प्रमुख दुर्गालाल श्रेष्...
बिराटनगरमा स्थानियले सडक जामगर्दै गरे प्रदर्शन
बिराटनगर / दुई दिन देखी पर्दै आएको झरी का कारण मिल्स एरियाको धेरै ठाउहरु डुबान भएपछी स्थानियहरु सडकमा उत्रिएका छन । मलाय...